Anyi bu ndi oru ohu nye ndi Google | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 22, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ulo oru ntaneti di iche. Ọ bụrụ n ’ịzụlite na ịkọwapụta akwụkwọ nkà ihe ọmụma kasị ukwuu n’ụwa nke ọrụ afọ ofufo, a ga-ahụ gị dị ka dike. Ọ bụrụ na ị na-eziga ndị mmadụ akwụkwọ ịkpọ òkù n'efu iji nwaa ma zaghachi sọftụwia beta gị, ị bụghị naanị dike… ị dịkwa mma. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịkwụ onye ji penny pen dollar iji rụọ ọrụ, ị na-akparị mmadụ ma na-erigbu ha. Mara mma otú na-arụ ọrụ… free bụ dịkwa mma, ọnụ ala bụ bụghị.
Google bu onye isi oru na adighi oru. Ha na-erite uru n'aka anyị kwa ụbọchị ma na n'aka nke anyị, anyị ga-eji ọrụ ha na ngwanrọ ha. Anyi bu ndi oru ha.
Anyị na-ede ọdịnaya bara uru ma bipụta ya na Internetntanetị, na-enye Google ohere ijere ya ozi na nsonaazụ ọchụchọ, yana mgbasa ozi enyere ndị asọmpi anyị. Daalụ, Google!
Anyị na-etinye njikọ na ọdịnaya anyị, na-enye Google ohere ịchọpụta ogo nke ibe ndị ahụ na nsonaazụ ọchụchọ ndị ahụ; Ya mere, na-abawanye uru nke search… na ịbawanye bidding competitiveness nke ndị na-akwụ kwa click mgbasa ozi. Daalụ, Google!
Anyị na-ede nnukwu ọdịnaya maka Google na Wiki usoro (Knol). Ha achịkọtala ihe karịrị 1 nde peeji nke ihe ọmụma iji kesaa… ma tinye mgbasa ozi na. Daalụ, Google!
Anyị na-ede akwụkwọ nkwado dị egwu na ọgbakọ ha. Nke a gha aghabe ndi otu ha otutu puku awa na akwukwo oru ya na nkwado ndi ahia. Daalụ, Google!
Anyị na-anwale ngwanrọ ha ma nye nzaghachi n'efu na data nnabata na ngwaahịa beta ha ọ bụla… na-azọpụta ha iri puku kwuru nde na nnwale na nkwado. Daalụ, Google!
Anyị na-agbakwunye ngwaahịa na ngwongwo anyị na Shozụ ahịa Google ka ha wee pụta na nsonaazụ… na anyị na-akwụ Google ụgwọ nke ahịa… ma ọ bụ na ha na-akpata ego na mgbasa ozi akwụ ụgwọ maka ndị asọmpi anyị. Daalụ, Google!
Anyị na-eji ihe nchọgharị ha na ọrụ ha, na-agbakwunye data nke onwe anyị, data nchọgharị, na ịzụta akụkọ ihe mere eme ka ha nwee ike ịdabere na anyị ma ree mgbasa ozi bara uru karị. Daalụ, Google!
Ekwela ka m mehie… M na-eso maka njem ahụ dịka onye ọ bụla ọzọ. Companylọ ọrụ anyị na-eji Google Apps na ngwa ndị ahụ na-arụ ọrụ dị egwu. M na-eji ihe niile Google, gụnyere m gam akporo ekwentị… na m hụrụ ya n'anya niile. Ana m ede ihe a na Google Chrome .. ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Google+ na-amasị m. M na-ede banyere ngwaahịa na ọrụ Google na Martech oge niile!
Emeela m ugboro ole na ole banyere Google. N'ime ha niile, agbanyeghị, echeghị m ịhapụ Google. Ike Google nwere ịdọrọ ndị na-ege ha ntị site n'inye ha free ihe dị ịtụnanya. Ndị mmadụ na-arịọ arịrịọ ka ha bata n'ọnụ ụzọ (dị ka ọtụtụ n'ime anyị mere mgbe Google+ malitere).
I nwere ike ịrụ ụka na ọ bụ nke aka gị.
You gbalịrị ịnweta otu ụbọchị na withoutntanetị na-enweghị Google itinye aka? Ekwenyesiri m ike na ọ gaghị ekwe omume!
Na-esote na ndepụta maka ndị isi Google? Gosiputa mgbasa ozi. Nke ahụ dị mma… Google choro ka ị nyere aka mee ka mgbasa ozi dịkwuo mkpa site na ịpị bọtịnụ Google +1 na mgbasa ozi. Anaghị m eme ihe a.
Ngosiputa mgbasa ozi bu ihe ama ama maka ugwo… na obuna ihe ojoo. Mana ọ bụrụ na Google nwere ike ịnweta enyemaka gị iji meziwanye otu ha si etinye mgbasa ozi ngosi yana ikpe ikpe dị mkpa na ogo nke mgbasa ozi… ha nwere ike melite nsonaazụ ahụ ma nweta ego karịa. Kedu ihe ị na-eche ndị odibo? Gaa na-arụ ọrụ!
Don't naghị akwụ ụgwọ maka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi gbasara ndị na-elekọta mmadụ